को adrenal ग्रन्थीहरूको को अन्तस्करणले माथि स्थित जुन ग्रन्थीहरूको, भनिन्छ। तिनीहरूले दुई तहहरू समावेश। तिनीहरूलाई को एक Cortex भनिन्छ, र दोस्रो - मस्तिष्क। यी दुई तहहरू फरक कार्यात्मक कार्यहरू छ। Cortical स्टेरयड उत्पादन। Medulla कोर्ट प्रकार हर्मोन विकास। को endocrine प्रकार को adrenal ग्रन्थीहरूको रोग यी अन्य अङ्गहरूको रोगहरु भन्दा कम साधारण छ। तर आफ्नो विशेषता तिनीहरूले उपचार गर्न कम उत्तरदायी छन्, र रोगी शरीर मा जटिलताहरू विकास गर्न सक्छ भन्ने हो।
यी विभिन्न विधिहरू को विकृति निदान लागि प्रयोग गरिन्छ। सर्वेक्षण सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका adrenal ग्रन्थीहरूको एमआरआई छ। यसलाई मार्फत यी शरीर कसरी सञ्चालन देख्न सक्छौं। यो ढिलो भएको adrenal ग्रन्थीहरूको मा आदर्श कुनै पनि विचलन निदान हुनेछ, अझ प्रभावकारी उपचार हुनेछ। एक प्रारम्भिक चरण मा रोग को पहिचान को जीव लागि कुनै पनि परिणाम बिना गर्न किन्न सक्छन्।
जो अवस्थामा तोकिएको छ?
को adrenal ग्रन्थीहरूको कार्य हर्मोन उत्पादन गर्न छ। उत्तरार्द्ध सम्पूर्ण जीव को कामकाज लागि आवश्यक छ। को adrenal ग्रन्थीहरूको सम्पूर्ण मानव शरीर मा एक महत्वपूर्ण लिंक छन्। त्यहाँ आफ्नो काम मा एक विफलता छ भने, यो सम्पूर्ण शरीर असर गर्छ। को adrenal ग्रन्थीहरूको सामान्य कामकाज को अवरोध व्यक्ति को स्वास्थ्य गम्भीर असर र आफ्नो जीवन एउटा खतरा बन्न सक्छ।
माथिको जडानमा, महत्वपूर्ण बिन्दु को adrenal ग्रन्थीहरूको कुनै पनि इनकार को प्रारम्भिक पत्ता लगाउने छ।
त्यहाँ अक्सर यी शरीर को छाल मा रोग परिवर्तन गर्न उत्तरदायी छ कि एक तथ्याङ्क छ। त्यहाँ घटनाको तपाईं तुरुन्त परीक्षा र निदान लागि चिकित्सा सुविधा सम्पर्क गर्नुपर्ने कि मानव शरीर मा परिवर्तन को एक नम्बर हो। यी समावेश:
छोटो अवधिमा वजन मा वृद्धि।
अनुहार मा सुनिंनु को उपस्थिति।
खण्डका को घटना छाला मा निशान। यो शरीरको वजन मा वृद्धि को कारण हुन्छ।
मानव शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली को अवरोध।
एक व्यक्ति एक चिकित्सा सुविधा माथिको लक्षण गर्न उत्तेजित गर्दछ भने, डाक्टर उसलाई विश्लेषण र एमआरआई वा सीटी स्क्यान को वितरण prescribes।
को adrenal ग्रन्थीहरूको एमआरआई। के गर्छ?
एमआरआई कि बिरामीको adrenal ग्रन्थीहरूको देखा पर्यो परिवर्तनहरू मार्फत देख्न सकिन्छ। तिनीहरूले ज्यादातर यी ट्यूमर को उपस्थिति सम्बन्धित छन्। उत्तरार्द्ध सौम्य वा घातक हुन सक्छ।
को adrenal ग्रन्थीहरूको गरेकोले एमआरआई रोगी गर्न, यो उपचार चिकित्सक निर्देशन गर्न आवश्यक छ। यो हो भने, तपाईं स्वतन्त्र परीक्षण गर्न सक्छन्। तर तपाईं यो भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। यो पनि सर्वेक्षण को परिणाम decrypted गर्न छ कि सम्झना गर्नुपर्छ। र यो गर्न सकिन्छ मात्र योग्य विशेषज्ञ द्वारा। को एमआरआई को दिशा चिकित्सक दिन भने त्यसैले राम्रो छ। त्यो त परिणाम गूढ रहस्य र आवश्यक उपचार गर्ने सल्लाह दिन्छन् बनाउँछ।
यसको विपरीत सामाग्री संग एक एमआरआई के हो?
एक घातक ट्यूमर देखि एक सौम्य भेद गर्न, रोगी adrenal एमआरआई विपरीत एजेन्ट संग प्रबन्ध छ। सर्वेक्षण उपकरण अनुसार यो एकदम चाँडै बाहिर छ मा विशेषता छ। सामान्यतया, यो प्रक्रिया कुनै एक घण्टा को एक चौथाई भन्दा लिन्छ। समय को यो अवधिमा रोगी लगे प्रबन्ध विपरीत एजेन्ट एक चुम्बकीय अनुनाद एजेन्ट र उत्सर्जित छ।
एमआरआई मृगौला र adrenal सर्जरी पछि रोगी तोकिएको। यो सर्वेक्षण तपाईं हस्तक्षेप हो, बाहिर थियो कसरी वा कुनै जटिलताहरू छन् मूल्याङ्कन गर्न अनुमति दिन्छ।
कसरी धेरै adrenal ग्रन्थीहरूको एक एमआरआई गर्छ? मूल्यहरु भिन्न छन् सर्वेक्षण। तर तपाईं एमआरआई सस्तो छैन भनेर थाहा हुँदैन। त्यसैले, एक विकल्पको रूपमा, पर्याप्त पैसा भएका विरामीहरु, एक सीटी स्क्यान पारित गर्न प्रस्ताव। चार हजार rubles को adrenal ग्रन्थीहरूको एमआरआई को न्यूनतम लागत। औसत लागत - 8000 rubles।
को adrenal ग्रन्थीहरूको एमआरआई। प्रशिक्षण कसरी र के गर्नुपर्छ?
यो परीक्षा आवश्यक छैन लागि केही विशेष तरिका तयार बताए छ। मात्र आवश्यकता यसलाई पूर्व कम्तिमा6घण्टा खाने छैन, अनुगमन गर्न।
पनि दिन अघि पिउने रक्सी, जो जो कच्चा फाइबर समावेश ग्याँसहरु र उत्पादन, समावेश पेय, नगर्न गर्नुपर्छ। यो पनि डेयरी उत्पादन उपभोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
एमआरआई त्यहाँ adrenal लागि contraindications के हुन्?
एक व्यक्ति 150 भन्दा बढी किलोग्राम वजन भने।
गर्भावस्था को पहिलो trimester contraindicated छ यो सर्वेक्षण गर्छन्।
एक व्यक्ति मिर्गी देखि पीडित भने, तपाईं पनि adrenal ग्रन्थीहरूको एक एमआरआई गर्न सक्नुहुन्न।
यस विपरीत एजेन्ट एक एलर्जी प्रतिक्रिया।
रोगी बेहोशी विषय हो भने।
एक महिला एक बच्चा breastfeeds गर्दा एक समय मा, adrenal ग्रन्थीहरूको एक एमआरआई गर्न सकिँदैन।
शरीर त्यहाँ यस्तो प्रत्यारोपण कुनै पनि धातु वस्तुहरू छन् भने साथै, चिकित्सक चेतावनी गर्नुपर्छ। साथै, चुम्बकीय र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू प्रक्रिया को लागि एक contraindication छन्।
को adrenal ग्रन्थीहरूको गणना टोमोग्राफी
को adrenal ग्रन्थीहरूको रोग विभिन्न आय, साथै अन्य रोगबाट मानिसहरूलाई विषय हुन सक्छ। माथि उल्लेख रूपमा, एक एमआरआई - एक बरु महंगा प्रक्रिया। तसर्थ, वहाँ एक विकल्प प्रक्रिया यो एक सीटी स्क्यान भनिन्छ छ।
यो प्रक्रिया एक सर्वेक्षण अनुसार, यो adrenal ग्रन्थीहरूको मा सौम्य र घातक ट्यूमर को उपस्थिति पत्ता लगाउन पनि सम्भव छ। को सीटी परीक्षा सञ्चालन गर्न, रोगी तयार गर्नुपर्छ। प्रशिक्षण साथै, उहाँले परीक्षण गर्नुपर्छ।
कम्प्युटेड टोमोग्राफी एकदम कम लागत छ। यो एक सस्तो उपकरण प्रयोग गरेर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्न भन्ने तथ्यलाई कारण छ। पनि सँगैको सामाग्री छैन त्यसैले महंगा छन्।
त्यहाँ सीटी एमआरआई देखि थप एक महत्त्वपूर्ण फरक छ। रोगी अन्तिम शरीर एक्स-रेज उजागर गर्दा। एमआरआई मात्र चुम्बकीय क्षेत्र emits। तसर्थ, एमआरआई विषय को शरीर कुनै पनि हानि गर्दैन। सीटी यस प्रकारको एक बजेट सर्वेक्षण छ कि माथि देखि यो स्पष्ट हुन्छ। तर यो पुन: आचरण सिफारिस गरिएको छैन। तपाईं थप एक परीक्षा आवश्यक छ भने, डाक्टर एक एमआरआई prescribes
Adrenals। महिला लक्षणहरु
एक महिलाको शरीर हर्मोन परिवर्तन गर्न खतरा छ। को adrenal ग्रन्थीहरूको मुख्य समारोह हर्मोन उत्पादन गर्न छ। यी पदार्थ को अपर्याप्त उत्पादन संग सम्बन्धित अङ्गहरू काममा प्रमुख उल्लंघन।
तपाईं adrenal ग्रन्थीहरूको जाँच गर्नुपर्छ भनेर कसरी थाहा छ? महिला लक्षणहरु फरक हुन सक्छ। आफ्नो प्रकृति शरीर मा उपस्थित जो रोग, निर्भर रहेको हुनाले। उदाहरणका लागि, लक्षण निम्न समावेश हुन सक्छ:
को menstrual चक्रको अवरोधहरू;
वृद्धि रक्तचाप गर्न झुकाव;
बारम्बार मांसपेशी ऐंठन।
यसलाई अस्वाभाविक thinness देखिन्छ;
यी र अन्य अवस्थामा, आफ्नो डाक्टर को adrenal ग्रन्थीहरूको एक एमआरआई गर्ने सल्लाह दिन्छन् सक्छ।
जन्म आमाबाबुले बच्चा को सेक्स निर्धारण
को टखने को पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस
रगत मा रक्सी कसरी खतरनाक छ, र के weathering यसको दर निर्धारण गर्छ?
खकार प्लग को छुट्टी
मस्तिष्क को अल्फा rhythms: विवरण, विशेषताहरु र कार्यहरु
र कसरी किन महिलाहरु मा pelvic अल्ट्रासाउंड सञ्चालन गर्न?
ब्रोंकाइटिस विकास भने, एन्टिबायोटिक आवश्यक वा छैन?
सञ्चालन सिद्धान्तहरू, प्रकार, मूल्यहरू: मिसिन Edging
झोल चिकन - क्लासिक पकाउने।
बुल्गारिया दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा र यो पछि। द्वितीय विश्व युद्ध मा बुल्गारिया को सहभागिता
संसारको सबैभन्दा रोमान्टिक शहर
जस्ता मलम मुखासे: समीक्षा, संरचना र प्रयोगको विधि
अपच गर्भावस्था दौरान, नवजात, बच्चा पुरानो छ।
सहारा बीच3* (टुनिशिया, Monastir): होटल, सेवा, को विवरण
आनन्द - हाम्रो प्राण राज्य हो
Jesolo मा होटल
Postcholecystectomical सिंड्रोम: अन्य रोगहरु मास्क